Karazan-javatra inona no tokony hojerentsika ny fampisehoana LED ivelany?
Ny fampisehoana LED ivelany dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fikojakojana, izay niaina ny rivotra sy ny orana. Noho izany dia mila misafidy ny fitaovana tsara kokoa isika, ary ankehitriny dia maro kokoa ireo mpamokatra fampisehoana LED izay miteraka kalitaon'ny fisehoan'ny LED izay tsy rafitra fiarovana tsara.
Fomba / dingana
Mpanjifa maro no tsy mazava amin'ny raharaha aorian'ny fividianana jiro LED ivelany ary tsy miraharaha ny fiantohana kalitao.
Ny fampiratiana LED ao anaty sy ivelany dia karazana tontolo iainana miasa, izay ny fepetra takiana amin'ny fampisehoana LED ivelany dia mila mitandrina bebe kokoa amin'ny tontolo ivelany.
Mariho azafady ho an'ireto teboka manaraka ireto:
1. Ny fisehoana dia napetraka ho an'ny ety ivelany, matetika amin'ny masoandro sy ny orana, rakotra rivotra sy vovoka, tontolo iainana mahantra. Ny fitaovana elektronika ho mando na mando mafy dia hiteraka lalan-kely na afo mihitsy aza, ka hiteraka tsy fahombiazana na ho afo mihitsy aza ka hiteraka fatiantoka.
2. Ny fisehoana dia mety vokatry ny fanafihana an-tsokosoko mahery vaika.
Miova be ny maripana manodidina. Ny fampiratiana dia miasa mamokatra hafanana iray, raha toa ka be loatra ny mari-pana manodidina ary tsy mahomby ny hafanana, dia mety hiasa tsy mandeha amin'ny laoniny ny faritra miharo, na hodorana mihitsy aza, ka tsy afaka mandeha tsara ny rafitra fampirantiana.
3. Ny mpihaino marobe, ny takiana amin'ny fahitana, ny sahan'asa takiana amin'ny fahitana, ny fiovana lehibe amin'ny hazavana manodidina, indrindra, dia mety ho tratry ny tara-masoandro mivantana.
Ho an'ireo fepetra manokana voalaza etsy ambony dia tsy maintsy atao ireto ny fampisehoana ivelany:
Voalohany, ny vatan'ny efijery sy ny trano dia tsy maintsy mifangaro henjana amin'ny porofon-drano sy tsy misy rano.
Ny vatan'ny efijery dia tokony ho ao anaty làlam-pandehanana tsara, raha vao afaka mivoaka tsara ny fisian'ny rano. Mametraka fitaovana fiarovana varatra amin'ny seho sy trano. Ny lohahevitra fampisehoana sy ny akorany mba hitazomana ny fotodrafitrasa tsara. Ary ny fanoherana ifotony dia latsaky ny 3 ohm, tselatra ateraky ny fandefasana onja lehibe ankehitriny.
Faharoa, apetraho ny fitaovana fitobian'ny rivotra, ka ny efijery ao anatin'ny mari-pana eo anelanelan'ny -10 ℃ -40 ℃. Napetraka ihany koa ny mpankafy axial ao ambadiky ny efijery, tsy misy hafanana.
Ampiasao ny mari-pana miasa -40 ℃ -80 ℃ eo anelanelan'ny puce circuit iraisan'ny indostrialy mba hisorohana ny hafanan'ny ririnina dia ambany loatra ka tsy afaka manomboka ny fampiratiana.
Farany, mba hahazoana antoka fa ny tontolo iainana raha toa ka matanjaka lavitra ny fahitana dia tsy maintsy mampiasa diode emitting fahazavana avo be ianao.
Safidy haino aman-jery miseho misafidy zoro fijerena vaovao vaovao, loko madio, fandrindrana tsy miova ary mihoatra ny 100,000 ora mandritra ny androm-piainany. Ny fonosana ivelany an'ny fampiroboroboana no malaza indrindra amin'ny fonony amin'ny sisin'ilay fantsom-by, silily tombo-kase, tsy misy fivorian'ny vy. Ny fisehoany tsara tarehy dia tsara tarehy, mateza, miaraka amin'ny masoandro manohitra ny masoandro, vovoka, rano, hafanana be, dimy "fiasa" manohitra.